Afqanistaan: Xuquuqda Aadanaha iyo dumarka ee Islamka - Equal Access International
Afghanistan: Xuquuqda Aadanaha iyo dumarka Islamka
Kadib markii la aqoonsaday fikradaha qaldan ee badan ee ku saabsan xuquuqda aadanaha iyo haweenka ee Afqanistaan, EAI waxay adeegsatay riwaayadaha raadiyaha iyo kooxaha doodda si ay u muujiso sida xuquuqda aadamigu ula jaan qaadi karto una dhaqan gashay dhaqanka Islaamka. 2007-2009
Afghanistan, Mu'asasada Flora Qoyska
Barnaamijku saamayn fiican kuma yeelan noloshayda laakiin, waxa aan ku arkay, saamayn wanaagsan ayuu ku yeeshay nolosha dhammaan dhagaystayaasha."
- Isuduwaha Kooxda Dhageysiga ee Gobolka Parwan
Barnaamijka 'EAI' 2007-2009 ee Xuquuqda Aadanaha iyo Haweenka Islaamka Waxay adeegsadeen raadiyaha iyo kooxaha wada hadalka si ay u iftiimiyaan dariiqyada in xuquuqul insaanka uusan kaliya ugu habboonayn dhaqanka Islaamka iyo qoraallada laakiin ay ku taageerayaan tiro aayado ah. Iyada oo taageero deeqsinimo leh laga helo Ururka Samafalka ee Flora, EAI waxay hirgelisay barnaamij xuquuqul insaanka loogu talagalay in lagu xoojiyo haweenka miyiga ah iyada oo loo marayo barnaamijyada raadiyaha, tababarka hogaaminta, iyo kooxaha dhageysiga haweenka. Barnaamijku wuxuu kordhiyey ka warqabka sharciyada iyo adeegyada jira ee taageera haweenka iyo gabdhaha wuxuuna dhiirrigeliyay baahida dib u habeyn dheeraad ah iyo adeegyo la kordhinayo iyadoo la beddelayo fikradaha ku saabsan doorka haweenka iyo gabdhaha ee bulshada Afgaanistaan. Markhaatiyo iyo waaya-aragnimada dumarka reer miyiga ah waxaa dhagaystayaal qaran u keenay kooxda EAI ee firfircoonida jinsiga ee Afgaanistaan.
EAI waxay soo saartay oo baahisay 100 qaybood oo ka mid ah taxanaha riwaayadaha raadiyaha “Xuquuqdayda, Xuquuqdaada, Xuquuqdayada ee Ilayska Islaamka.” Barnaamijka Raadiyaha waxaa loogu talagalay in wax looga qabto arrimaha haweenka. Farriinta bandhigyada waxay ka soo baxday Baaqa Islaamka ee Xuquuqda Aadanaha. Jilayaasha showgu waxay ka baaraandegeen arrimahan macnaha guud ee ay ku leeyihiin caqiidadooda muslimka ah iyo dhaqdhaqaaqa qoyska.
Intaas waxaa sii dheer, barnaamijka raadiyaha "Afgaanistaanteenna Jecel" wuxuu muwaadiniinta Afgaanistaan ​​u soo bandhigay qaar ka mid ah sheekooyinka dhiirrigelinta iyo guulaha ay hoggaaminayaan haweenka Afgaanistaan. Barnaamijku wuxuu bixiyay rajo iyo aqoon ku saabsan xuquuqda haweenka ee dalka oo dhan. Isku darka silsiladaha taxanaha ah "Xuquuqdayda, Xuquuqdaada, Xuquuqdeenna Iftiinka Islaamka" iyo "Afgaanistaan ​​Jecelnahay" waxay dhiirrigelisay isbeddel bulsho oo heer bulsho ah. Kooxaha dhageysigu waxay xoojiyeen xiriirkii bulshada iyagoo noqday shabakad taageero u ah haweenka inta badan midba midka kale ka go'doonsan.
Goobaha dhageysiga haweenka waxaa loo sameeyay inay ka jawaabaan dhibaatooyinka ay la kulmaan kooxda tababarka xuquuqda aadanaha ee ku lug lahaanshaha haweenka miyiga ku nool wadahadalada ku saleysan xuquuqda, sababa la xiriira caqabadaha dhaqameed ee dhaqdhaqaaqyadooda. Goobaha dhagaysiga waxaa loo oggolyahay isweydaarsiga aqoonta oo firfircoon iyada oo ka qayb galayaashu ay weydiinayaan su'aalo ayna la wadaagaan waaya-aragnimadooda. Shaqsi ahaanta wadahadalka ayaa ka caawisay haweenka inay sii hayaan macluumaadka ay ku maqleen barnaamijka idaacadda. Qaabkan ayaa meesha ka saaray go'doomintii bulshada ee haween badan oo reer Afqanistaan ​​ah ay la kulmaan iyada oo fursad yar fursad u siisay in ay la kulmaan haweenka ka baxsan qoyskooda. Kooxaha dhageysigu waxay siiyeen jawi aamin ah oo ay ku wada xiriiraan.
Marka la eego qeexitaanka xuquuqda aadanaha ee xaalada Afgaanistaan, oo ku saleysan khibradeena la shaqeynta dadka reer miyiga ah ee Afgaanistaan ​​oo dhan, iyo noocyada xuquuqda kaqeybgalayaasheena reer Afghanistaan ​​ay la xiriireen, EAI waxay si ula kac ah u qaabeeysay mashruuca si wax looga qabto qeexitaan ballaaran oo ku saabsan tacaddiyada xuquuqda aadanaha. Tan waxaa ka mid ah oo keliya rabshadaha ka dhanka ah bulshada rayidka ee ay abaabulaan kooxo hubeysan oo abaabulan laakiin sidoo kale diidmada adeegyada aasaasiga ah ee bulshada iyo xuquuqda haweenka. Tusaale ahaan:
Xuquuqda waxbarashada aasaasiga ah ee haweenka iyo carruurta;
xuquuqda aad u leedahay daryeel caafimaad;
xuquuqda aad u leedahay kaqeybqaadashada nashaadaadka dhisidda
xuquuqda aad u leedahay sheegashada dhaxal si loo taageero qoysaska;
xuquuqda aad u leedahay inaad dooratid inaadan gelin guurka khasabka ah ama ilmaha hore;
Xuquuqda codbixinta doorashooyinka dowladda.
Kaliya ma aanan ka wada hadalnay xuquuqda aadanaha, laakiin shaqaalaha EAI Afqaanistaan ​​waxay muujiyeen dhiirrigelinta xuquuqda aadanaha. Si loo kordhiyo helitaanka macluumaadka kooxdu waxay siisay idaacado dayax gacmeedyo si loo hubiyo xuquuqda haweenka ay u leeyihiin inay helaan macluumaadka bulshooyinka aadka loo fogeeyo. EAI waxay abaabushay bulshooyinka si ay u qabtaan aqoon isweydaarsiyo ku saabsan tababarka xuquuqda aadanaha, meelaha qaarkood oo ay la socdaan kooxo jinsi isku dhafan, si ay u taageeraan xuquuqda dadka ee macluumaadka, waxbarashada aan rasmiga ahayn, iyo xaqa ay u leeyihiin inay wadahadal la yeeshaan asxaabta si looga wada hadlo xuquuqda aadanaha ee diinta Islaamka. Aqoonta qotada dheer ee EAI iyo xiriirka ay la leedahay bulshooyinka dhamaan gobolada Afghanistan waxay noo suurta galisay inaan si guul leh ula xaajoodo hogaamiyaasha raga muxaafidka ah si haweenka loogu ogolaado inay iskaga baxaan xeryahooda si ay uga qeyb galaan kooxaha dhageysiga haweenka.
"Fikradda ugu muhiimsan ee aan barannay waxay ahayd in haweenku ay xaq u leeyihiin in ay guur ku doortaan." - Dhageysiga Ka-qaybqaataha Kooxda
dhagaystayaashu waxay gaadheen Afghanistan
dadku waxay ku gaadheen shabakad raadiyaha dayax gacmeed
ee jaaliyadaha la waraystay ayaa codsaday tababar dheeraad ah oo xaga xuquuqul insaanka iyo taageero laxiriirta
Markay dhagaysteen dhacdadan "Gacaliye Afqaanistaan" oo ku saabsan xaqa ay haweenku u leeyihiin inay ka shaqeeyaan guryahooda ka baxsan, koox haween ah oo ka tirsan degmada Paghman ayaa la xiriirtay kooxda EAI. Waxay barteen in si ay u shaqeeyaan ay ugu baahan yihiin inay helaan kaararka aqoonsiga. Waxay codsadeen EAI inay u safraan magaaladooda si ay u sawiraan xubnaha dhagaystayaasha dhageysanaya si ay u helaan id ah lama huraanka ah
Degmada Panjab ee Bamiyan, kadib dhacdadii kahadashay guurka khasabka ah, haweenka aan guursan ee dhagta dhageysigu waxay si wada jir ah uga codsadeen waalidkood in lagala tashto wixii ku saabsan nin kasta oo laga yaabo inay guursadaan iyo in ra'yigooda laga fiirsado kahor intaanu balan qaad guurka.
Aragtiyada ku saabsan waxbarashada gabdhaha ayaa sidoo kale si togan saameyn ugu yeeshay taxanaha. Meelaha qaar, haweenku waxay casuumeen ragga inay dhagaystaan ​​barnaamijyada. Hal tuulo, waxaa jiray nin aan ku raacsaneyn waxbarashada gabdhaha oo aan u oggolaan gabadhiisa inay dugsi dhigato. Ka dib markuu dhegaystay barnaamijka oo uu la hadlay kooxda, wuxuu beddelay fikirkiisii ​​wuxuuna ogolaaday inuu iska daayo.
Goobaha Dhageysiga Dhageysiga Haweenka 'hadda waxay u shaqeeyaan sidii koox taageero u leh haweenka bulshada, adeeggoodana waxay ka dheereeysaa ujeeddooyinka waxbarasho ee asalka ah ee qaabka. ”	 Qiimeeyaha Mashruuca Dibadda